क्रान्तिनायक गोञ्जालोको जेलभित्रै निधन (जीवनीसहित) - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeदेशक्रान्तिनायक गोञ्जालोको जेलभित्रै निधन (जीवनीसहित)
क्रान्तिनायक गोञ्जालोको जेलभित्रै निधन (जीवनीसहित)
काठमाडौं। पेरुको तात्कालिन शासक फुजीमोरीले सन् १९९२ मा गिरफ्तार गरेर २९ वर्षसम्म बन्दी बनाइएका गोञ्जालोको जेलमै मृत्यु भएको छ। पेरु कम्युनिस्ट पार्टी (साइनिङपाथ) का नेता गोञ्जालोको शनिबार साँझ पेरुको जेलमा ८६ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो।
को हुन् डा. गोञ्जालो ?
गोञ्जालोको जन्म सन् १९३४ डिसेम्बर ३ मा एरक्वेपा, एण्डिज श्रृंखला पेरुमा भएको हो। ८६ वर्षीय कमरेड गोन्जालोको वास्तविक नाम डा. अविमायल गुज्मन रेनोसो हो। एरक्वेपा विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका गोञ्जालोले सन् १९६२ देखि १९७४ सम्म दर्शनशास्त्र विभाग हवामांगा विश्वविद्यालय, आयाकुचो पेरुमा प्राध्यापन गरेका थिए। सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धमा फाँसीवादको पराजयमा खुसी मनाउन पेरुका वामपन्थीहरुले निकालेको जुलुुसबाट गिरफ्तार भएपछि उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको थियो।
उनी सन् १९४६ मा कम्युनिस्ट योङ ब्रिगेटको सदस्य भएका थिए। उनी सन् १९५६ मा एरक्वेपा विश्वविद्यालयको विद्यार्थी संघको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। १९६५ मा चीनको भ्रमणपछि १९६६ मा पेरु कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य भएका उनलाई सन् १९६९ मा कम्युनिस्टको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। सन् १९७५ मा पेरु कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भएका गोञ्जालोकै नेतृत्वमा सन् १९८१ मा पेरुमा सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गरिएको थियो। यो जनयुद्धले अपार सफलता पाइरहेको अवस्थामा प्रतिक्रियावादी फुजीमोरी सरकारले सन् १९९२ को सप्टेम्बर १२ मा पक्राउ गरी सैनिक जेलमा राखेर आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो।
सन् १९८० को दशकमा पेरु कम्युनिस्ट पार्टी (साइनिङ पाथ) का अध्यक्ष गोञ्जालोको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धले पेरुमा एकदम छिटो विकास गर्‍यो। गाउँदेखि शहर घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत त्यस जनयुद्ध केन्द्रीय सत्ता कब्जाको नजिक पुगिसकेको थियो। यसै क्रममा सन् १९९२ सेप्टेम्बर १२ तारिखका दिन राजधानी लिमा शहरको एक घरबाट फुजीमोरी सरकारले गोञ्जालोलाई गिरफ्तार गरेर एक सैनिक जेलमा थुनेर आजीवन कारावासको सजाय सुनायो । क्रान्तिनायक ८६ वर्षीय गोञ्जालोको शनिबार बेलुका जेलभित्रै निधन भएको छ।
Previous articleआज पनि संसदमा एमाले सांसदको नाराबाजी
Next articleअमेरिकाको जवाफ पढेपछि अब हामी एमसीसी नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने स्थितिमा आइपुग्यौँ : देव गुरुङ